U-Luclay Uthole Ifa | News24
U-Luclay Uthole Ifa
Ubuyena yibo obenza ababukeli bakwazi ukumbekezelela, esho. “Abantu abakaze
bangiqondisise kahle. Bebehlale bezitshela ukuthi indlela engiyiyo yenziwa ukusebenza ku-TV, kanti kusukela kudala nginje.
“Abadlali babezitshela ukuthi ngiyingane yesigwili, mhlawumbe indodana kaPatrice Motsepe noma kaTokyo Sexwale noma ka- Mandela. Kodwa bengazi ukuthi angisiyo indodana yala madoda esengiwabalile: Ngiyi- ndodana kaNkulunkulu, umvikeli wempilo yami.” Wasondelana kakhulu noWeza yize eziphika izinsolo zokuthi bathandana. Basolwa ngokuthandana ngemva kokuqa-bulana ngobunye ubusuku kulo mdlalo.
“Sifana ngezinto eziningi. Sasikhuluma
ngokuningi, mayelana nalo mkhakha nempilo. Uhlakaniphile, nokuyinto engayi- thanda ngaye. Ngakubeka kwacaca ngisafika ukuthi angizimisele ngokuxoxa nomuntu ongazi noma uyaphuma noma uyangena, uWeza wayengenjalo neze.